एजेन्सी असार ३, २०७६ | मंगलबार
पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने ट्यांकर ढुवानी व्यवसायीले अनिवार्य भ्याटमा जाने नियम कार्यान्वय गर्न खोजे हड्ताल गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले सोमबार आयल निगमलाई एक पत्र लेख्दै १२ असारभित्रै भ्याटम...
एजेन्सी असार २, २०७६ | सोमबार
काठमाडौं | हाम्रो समाजमा श्रीमान् भन्दा श्रीमतीको उमेर कम हुन्छ । अर्कोतिर युवतीहरु पनि आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग दाम्पत्य जीवन विताउने अभिलाषा प्रकट गर्छन् । उनीहरु प्रेम गर्दा होस् वा विवाह गर्दा, आफुभन्दा ब...
अस्टेलियामा सिमोनलाई रजत
ऐजेन्सी । नेपाली कराते खेलाडी सिमोन खत्रीले अस्टेलियाको मेल्बर्नमा भएको भीकेएल सुकोकाइ ओपन कराते च्याम्पियनसिपमा रजत जितेका छन् । परुष ७५ केजीमाथि तौलसमुहमा सिमोन फाइनलमा अस्टेलियाका फिलिपसंग पराजित भएपछ...
एजेन्सी । भारतको बिहारस्थित मुजफरपुरमा इन्सेफलाइटिसबाट १०० भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । श्रीकृष्ण मेडिकल कलेजका सुपरीन्टेन्डेन्ट सुनिल कुमार शाहीका अनुसार उपचारका लागि कलेजको...
सडक दुर्घटनामा, १८ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । पश्चिम भेनेजुएलाको ग्रामीण इलाकामा आइतबार भएको एक बस दुर्घटनामा कम्तीमा १८ व्यक्तिको मृत्यु भएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ । यस दुर्घटनामा १४ जनाको दुर्घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको थियो । सोही दुर्...
भारतले अमेरीकी सामानमा करबृद्धि गर्यो
एजेन्सी। २८ किसिमका अमेरिकी सामानमा भारतले करवृद्धि गरेको छ । अमेरीकाले निर्यात गर्ने बदाम, ओखर र स्याउमा समेत जस्ता फलफुलहरुमा करवृद्धि गरेको भारतीय केन्द्रिय भन्सार बोर्डले जनाएको छ । भारतीय अधिकार...
पाकिस्तानविरुद्धको खेलमा रोहित शर्माको शतक
एजेन्सी असार १, २०७६ | आइतबार
काठमाडौं। एजेन्सी। भारतका ब्याट्सम्यान रोहित शर्माले आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटअन्तर्गत पाकिस्तानविरुद्धको खेलमा शतक पूरा गरेका छन् । ओपनरमा आएका उनले भारतका लागि ८५ बल खेल्दै ९ चौका र ३ छक्काको सहयोगमा ...
सोमालिया कार बम विस्फोटनमा परी दशको मृत्यु, २६ घाइते
एजेन्सी । कार बम विस्फोटनमा परी सोमालियाको राजधानी मोगादिसुमा कम्तीमा दश जनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा परी अन्य २६ जना घाइते भएको प्रहरी अधिकारीहरुले आइतबार जानकारी दिएका छन् । सोमाली प्रहरी आयुक्त ...
राजस्थानकी सुमन मिस इन्डिया घोषित
एजेन्सी । राजस्थान निवासी सुमन राव ‘फेमिना मिस इन्डिया २०१९’ घोषित भएकी छन् । शनिबार राती मुम्बईको सरदार वल्लभभाई पटेल इन्डोर स्टेडियममा आयोजित प्रतियोगितामा उनले अन्य प्रतियोगिलाई पछि पार्दै उपाधि...
पाकिस्तानविरुद्धको खेलमा रोहितको अर्धशतक पूरा
एजेन्सी । आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटअन्तर्गत पाकिस्तानविरुद्धको खेलमा सुपर ओभर सकिँदा भारतले ५३ रन जोडेको छ । भारतका लागि ओपनरमा आएका रोहित शर्माले ३७ रन जोड्दा केएल राहुलले १४ रन बनाएका छन् । ओल्डट्रा...
एजेन्सी । भारतले २८ किसिमका अमेरिकी सामानमा करवृद्धि गरेको जनाएको छ । अमेरिकाले भारतलाई दिइआएको व्यापार सुविधा कटौती गरेको बदलामा उक्त कदम चालेको भारतीय अधिकारीहरुले जनाएका छन् । भारतीय केन्द्रीय राजश्व...
एजेन्सी । साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सल्मान अल साउदले आफ्नो देशले क्षेत्रीय युद्ध नचाहेको बताएका छन् । एक पत्रिकालाई आइतबार दिएको अन्तर्वार्तामा उनले कसैको दवावमा कुनै सम्झौता गर्न नडराउने पनि प्रष्ट पारेका...
एजेन्सी । मध्य अमेरिकी मुलुकहरु हैटी र गिनीबाट संयुक्तराज्य अमेरिकातर्फ हिँडेका २४ जना अवैध आप्रवासीलाई ग्वाटेमाला प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी प्रवक्ता पाब्लो कास्टिल्लोले ग्वाटेमाला शहरको उत्तरी...
एजेन्सी । बिजुलीको बिल चेक गर्न आउने मान्छेले हत्या गरे भन्ने सुन्दा तपाइँ पनि झस्किनु हुन्छ होला ? किनकि तपाइँ हाम्रो घरमा पनि बिजुलीको बिल चेक गर्ने मान्छे आइराख्छन् । तपाइँलाई अचम्म पनि लाग्न सक्छ ब...
एजेन्सी । न्यूजील्यान्डको ला–इस्पारेन्स रकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आइतबार बिहान ६.६ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प गएको छ । अमेरिकी भौगर्भिक सर्भेका अनुसार उक्त भूकम्प जमिनको सतहबाट करिब १११ किलोमिटर गहिराईमा गएको ...
कोपा अमेरिका फुटबल खेलमा, अर्जेन्टिना स्तब्ध
एजेन्सी। लियोनेल मेस्सीको कप्तानीमा रहेको अर्जेन्टिना कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गतको आफ्नो पहिलो खेलमा कोलम्बियासँग २–० गोल अन्तरले पराजित भएको छ । विगत २० वर्षमा पहिलो पटक कोलम्...
विश्वकप क्रिकेटकै ठुलो खेल: भारत र पाकिस्तान भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?
एजेन्सी । इंग्ल्याण्डमा जारी १२ औं संस्करणको आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा आज भारत र पाकिस्तानबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । इंग्ल्याण्डको म्यानचेस्टरमा हुने एक मात्र खेलमा उपाधि दाबेदार राष्ट्र भारत र पाकिस्तानबीच ...
युगान्डामा फैलिएको इबोलाका कारण डब्लुएचओको आकस्मिक बैठक
एजेन्सी जेठ ३१, २०७६ | शुक्रबार
एजेन्सी । अफ्रिकी मुलुकहरु कङ्गो र युगान्डामा प्राणघातक रोग इबोलाका बिरामी देखिएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओ को शुक्रबार आपतकालीन बैठक बस्दैछ । बैठकले इबोलाको महामारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय खतराका रुपमा घोषणा...
भियतनाममा सैनिक विमान दुर्घटनामा दुईको मृत्यु
एजेन्सी । मध्य भियतनामको खान्ह होआ प्रान्तमा तालिमका क्रममा शुक्रबार एक सैनिक विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । सो दुर्घटनामा दुई जना विमान चालकको मृत्यु भएको भियतनामी समाचार समितिले जानकारी दिएको छ । क्या...
केन्याको आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ३ प्रतिशत
एजेन्सी । केन्याको अर्थतन्त्र सन् २०१९ मा करिब ६ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार यो वृद्धि सन् २०१८ कै हाराहारी हो । केन्याका अर्थमन्त्री हेनरी रोटिचले विश्वको बदलिँद...
Page 1 of 110 >>